ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 12 လာသောအခါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကောင်းမြင် Stay ရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 21 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန် demoralizing ခံစားနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုမီးရှို့ပစ်ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်, စိတ်ပျက်နေနှင့်ပင်ခါးသီး. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသင်သည်ဤရှောင်ရှားရမည့်အစားကဖြစ်နိုင် breezy ပျော်ရွှင်စရာအတွေ့အကြုံသို့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စေပါဘူး? ဒီနေရာတွင်တချို့အကြံပြုချက်များမှာ.
– ရိုးရှင်းစွာသင်လိုချင်တာတွေမဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်အွန်လိုင်းလူတွေအများကြီးတွေ့လာဖြစ်ကြောင်းတွေကို Accept လုပ်ပါ. ဒါကကောင်းပါတယ်! ဒါဟာသဘောတူညီချက်၏အစိတ်အပိုင်းင်. ထိုကိန်းဂဏန်းများကိုရာပေါင်းများစွာသောသို့ရောက်ရှိလျှင်ချွတ်မယူကြ (သင်ရေတွက်လျှင်သင်တို့ကိုငါတွှေရန်နှင့်ဤမြင့်မားရ​​ောက်ရှိနိုင်ကဤပြောတာမဟုတ်ဘူး တိုင်း e-mail,). အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူနောက်ကျောနှင့်ထွက်ရှိစာတွေကိုအများကြီးဖြစ်ကြပြီး. ဒါကြောင့် Accept သင်နှောင့်အယှက်မည်မဟုတ်.
– e-mail နှင့်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစနစ်များရှိသည်. ဒါဟာသင်ထွက်ရှို့စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့နေဖို့ကိုကူညီကာကွယ်နိုင်ပါသည်. ငါ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းခဲ့တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီးအနည်းငယ်လိုက်လျောညီထွေမည့်လူဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းတဲ့ standard ကို e-mail ကိုရှိခဲ့ဖူးသည်. ငါသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်သိ, တကယ်တော့သူကဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စွမ်းအင်မြင့်မားနေဖို့ပဲထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းခဲ့သည်. သင်သာမတုန့်ပြန်ရန်ပြီးပြည့်စုံသော e-mail, စာရိုက်နာရီကုန်ရပြီပြီးနောက် (နောက်တဖန်အ), ငါသည်ဤအကြံပြုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ကြလိမ့်မည်. သင်စိတ်ဝင်စားကြခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မ မူတည်. လူဝတ်သောသို့ကွဲပြားခြားနား folders မ​​ျားလည်းရှိနိုင်ပါသည်.
– တိုတောင်းသောကနဦးက e-mail ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ. ငါသည်သင်တို့ကိုလူတွေသိလာအောင်နှောင့်အယှက်မကအကြံပြုခြင်းမဟုတ်, သူတို့ကိုသင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာသင်တော်တော်လေးတိုတိုကနဦးက e-mail ကိုစောင့်ရှောက်သာကြောင်း. အများအပြားအတို e-mail နောက်မှသင်သည်နေဆဲနှစ်ခုလုံးစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှန်လျှင်အသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအနည်းငယ်နက်ရှိုင်းသွားနိုင်ပါတယ်. ဤသူကားအသက်သက်ထုတ်ရှို့တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့်သင်ကို e-mail နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးရရှိပါကကကိုင်တွယ်ရန်.
– အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်း '' လူတစ်ဦးမှာ 'မှ Move. သိသာထင်ရှားတဲ့စိတ်ကိုဘေးကင်းရေးကိုစောင့်ရှောက်, ငါအလျင်အမြန်စစ်မှန်သောအသက်ကိုရက်စွဲဖို့ငါ့ clients များအားပေး. လူများတို့သည်အွန်လိုင်းဘယ်လောက်မှစစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်, သင်သည်စစ်မှန်သောအသက်မှာသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည်တိုင်အောင်သင်တို့အဘို့မထိုက်မတန်ဖြစ်ရတော့မှာလျှင်သင်သိဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်. ဒီအဆုံးအွန်လိုင်းကျောနဲ့ထွက်စာတိုပို့စနစ်နာရီကိုမဖြုန်းပါနဲ့, မဟုတ်ရင်သင်များအတွက်သင့်လျော်မဖြစ်စေခြင်းငှါလူများအပေါ်မှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းတီးတော်မူမည်.
– သင်ပို့လိုက်တဲ့ e-mail မှပြန်ကြားချက်မရကြဘူးဆိုရင်မပူပါနဲ့. ဒီကိုငါသိသင်ဘာဖြစ်သွားပါကရွားလှခံစားပြီးမှနောက်တဖန်နိုင်ပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့်မခံမယူကြဘူး. တခါတရံငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော် NOTHING ရအဘယ်မှာရှိခြောက်သွေ့သောကာလမှာမှတဆင့်သွား. ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ e-mail များကိုမဆိုရန်မပြန်ကြားချက်, ဒါကြောင့်အပေါ်အဆက်အသွယ်များနှင့်မရှိ. ဤသူသည်သင်တို့ဖြစ်သွားလျှင်စိုးရိမ်ထိတ်လန်မထားပါနဲ့, ဒါပေမဲ့ဒါဟာသင့်ပရိုဖိုင်းကိုနှင့်သင် posted ထားသောပုံများကိုပေါ်မှာရေးထားတဲ့အဘယ်မှာနောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်ဖတ်ဖို့ထိုက်သည်. သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ၏လေသံကျိန်းသေဖော်ရွေဖြစ်သင့်, အလင်းနှင့်ချိုသော. သင့်ပရိုဖိုင်းကို checked လုပ်ထားတစ်ချိန်ကသင်နေဆဲမျှမကံကောင်းပါစေရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ကျော်မကြည့်ပါနှင့်သင်အချို့သောတုံ့ပြန်ချက်များကိုပေးဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆွေကိုမေး. သူတို့ကိုပင်သေချာသူတို့ OK ကိုဖတ်စေခြင်းငှါသင့်ကိုထုတ်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားအချို့အပေါ်စစ်ဆေးပါပြီ.
– သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြပြီးအချို့ကိုသင်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဘာမျှမရရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်လျှင်အလားတူသွေးပြန်ကြောများတွင်တဆင့်လာ, နောက်တဖန်အစိတ်မပူပါနဲ့. အထက်အဆင့်ဖတ်ရှုပြီးလိုက်နာကျင့်. ဒါ့အပြင်ဒီအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ပုလ္စွမ်းအင်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုသောတစုံတယောက်ကိုဧရိယာကြောင်းသတိပြုပါ, ဒီကနဦးခြေလှမ်းများအတွက်. အဘယ်သို့ငါဒီနားမှာဆိုလိုရှေ့ဆက် သွား. သင်တို့ကြိုက်လူနှင့် ဆက်သွယ်. စာတိုပေးပို့ရေးခြင်းအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရွေ့လုပ်ဖြစ်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအရမ်း '' ဆူညံ '' ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့အထံလူသိများအောင်မကြဘူးဆိုရင်သင့်ကိုလျစ်လျူရှုခံရသလိုရနိုင်. အရပ်ဌာန၌လူကိုဆက်သွယ်ပါနဲ့သင့်ရဲ့စနစ်တွေကိုရရန်သင့်ပုလ္စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပါ, ဆက်သွယ်ရေးနေပုံကိုတစ်ချိန်ကထို့နောက်သင်၏ဣတ္စွမ်းအင်ကိုသို့ညာဘက်ကျော drop.
– သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားလျှင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြောင့်မခံမယူပါနဲ့. ငါတို့ရှိသမျှသည်အကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်. သင်အွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း, သူတို့ကိုသင်နဲ့စကား, ထိုသို့လူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းစွာမယ့်, အတော်လေးတည်ဆောက်ခြင်း, ဖြစ်ကောင်းသင်သည်ပင်နေ့စွဲတွေအတွက်တောင်းဆိုနေတာအထိအလုပ်လုပ်ကြရပါသည်, ပြီးတော့ရုတ်တရက် '' POOF '' သူတို့မီးခိုးတစ်ဦးကိုမိုဃ်းတိမ်၌ကွယ်ပျောက်, နောက်တဖန်အထင်ရှားစေခြင်းငှါဘယ်တော့မှမ. သင်ရွားလှတစ်ခုခုပြောခဲ့ပါ? သူတို့သေခဲ့ကြ? ကောင်းပြီဖြစ်နိုင်မ. ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းသူတို့အွန်လိုင်းအခြားလူတို့အားစကားပြောဆိုခဲ့ကြသည်, နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးရှိဦးအတွက်ပထမဆုံးတယ်, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသူတို့နှင့်အတူမေတ္တာ၌လျှို့ဝှက်စွာနေကြဆဲဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ဖြစ်သူတက်ပြန်ပြသင့်မှာကံကောင်းထွက်ပေါက်ခဲ့. အဆိုပါအချက်သည်သင်ဖွယ်ရှိသိဘယ်တော့မှရမှာဖြစ်ပါတယ်. ဖြစ်ပုံကဒီလို လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်! သင်သည်ဤသိလျှင်ထိုသို့ထဲကလက်နက်ယူအထောက်အကူပြု. သင်အမှန်တကယ်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ကိုယ်တော်ကိုခရီးဦးကြိုခဲ့ကြသည့်တိုင်အောင်အစဉ်မပြတ်ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပါဝင်ပတ်သက်ရမငါ့အမျိုးသမီးများ clients များအကြံပေးချင်ပါတယ်, နှင့်တကယ်တော့သူသည်သင်တို့အထဲ၌အလေးအနက်စိတ်ဝင်စားသည်သင်တို့ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်မူသည်တိုင်အောင်. ထိုအချိန်အထိသူသည်အများသောထဲကအသင့်အဘို့အရုံမျှ option ဖြစ်တယ်. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ '' ပျောက်ကွယ် '' မယူပါနဲ့.
– ဆားတစ်ဦးဖြစ်တော့နှင့်အတူကအားလုံးကိုဆက်ဆံပါ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အဘယ်သို့သောအ. တဖန်သင်တို့ကသင်နှင့်အတူတစ်ဦးပိုပြီးလွယ်ကူအချိန်ကိုရလိ​​မ့်မည်ဟုအဘယ်မည်သောကလက်ခံဖို့နိုင်လျှင်. အချို့ကိုသင် oddballs တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည်, သင်ရွားလှတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်သောသူလူတချို့ကိုခရီးဦးကြိုကြမည်, သင်သည်ဖြစ်ကောင်းသင်ကြိုက်တချို့လူတွေတွေ့လိမ့်မည်လို့သင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်နိုင်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်. သို့သော်ထိုသို့အခြားအဘယ်အရာကိုမဆို, ဒါဟာအတွေ့အကြုံဖြစ်လိမ့်မည်. သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအသားကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကြီးထွားလာမည်ကိုသင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ကျင့်သုံးရ. ဒါကြောင့်အရှုံးပေးမ, ကိုယ့်ကိုဆားတစ်ဦးဖြစ်တော့နှင့်အတူယူနေတာသေချာပါစေ, လမ်းတစ်လျှောက်ကသင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရယ်မောနှင့်အချို့သောပျော်စရာရှိသည်.